[72% OFF] Kuubannada Holidayinn & Koodhadhka foojarrada
Holidayinn Xeerarka kuubanka
Ka Qaado $50 Qiimaha Qolka ee Koodhka ee Holidayin.com Ku keydso mid ka mid ah Kuuboonadayada ugu Fiican ee Fasaxa ee Ogosto 2021: 20% Off. Soo hel 30 tijaabiyey oo la xaqiijiyey Xeerarka Xayeysiiska Holiday Inn, waxaa leh Groupon.
Ku raaxayso 20% dhimis 3+ habeen Hudheelada Ihg ee Xulashada leh ee Koodhka leh Ballan qol ama qol ku yaal guryaha Holiday Inn ama Holiday Inn Express si aad ugu raaxaysato adeegyada sida sariiraha raaxada leh, xarumaha jimicsiga, barkadaha dabbaasha, goobta cuntada wanaagsan iyo waxyaabo kaloo badan. U hubso inaad u isticmaasho koodhka xayeysiiska ee Holiday Inn ee qiimo dhimista boos celintaada xigta ama inaad ka hesho dhibcaha Abaalmarinta Mudnaanta Naadiga Kooxda InterContinental Hotels Group ...
10% Dheeraad ah Hudheelada leh Xeerka Kuubanka ee Holidayinn.com Sida loo adeegsado kuubanka Holiday Inn Carruurtu had iyo jeer waxay joogaan oo wax ku cunaan Holiday Inn markaa haddii aad la safraysid carruurta, tani waa wax weyn lafteeda. Waxaad ka heli kartaa qiimo dhimis aad u weyn websaydka Holiday Inn hoostooda “Heshiisyada Wanaagsan”. Ku biir barnaamijkooda Abaalmarinta Mudnaanta Naadiga (bilaash) si aad u hesho dhibco la soo furan karo habeenno lacag la'aan ah.
Ka Qaado 10% Hoteelada Koodhka Kuuban Ku hel qiimo badan lacagtaada koodhadhka xayeysiiska ee Holiday Inn & qiimo dhimis. Soo hel heshiisyo gaar ah, baakado & dalabyo dhimis si aad u ballansato joogitaankaaga. Kalfadhigaagu wuxuu ku dhammaan doonaa 5 daqiiqo, 0 ilbidhiqsi, dhaqdhaqaaq la'aan awgeed.
Ku raaxayso 17% iibsiyada Off Holidayinn.com Hel rasiidhada Holiday Inn. Sideen u isticmaalaa tigidhada Holiday Inn? Si aad u isticmaasho kuubanka Holiday Inn, ku koobi koodka xayeysiinta ee laxiriira sabuuraddaada oo ku dabaq markaad fiirinayso. Qaar ka mid ah tigidhada Holiday Inn ayaa kaliya khuseeya badeecado gaar ah, markaa hubso in dhammaan waxyaabaha ku jira gaadhigaagu u qalmaan ka hor intaadan gudbin amarkaaga. Haddii uu jiro dukaan leben-hoobiye ah oo agagaarkaaga ah, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale isticmaasho kuuban daabacan. Hel rasiidhada Holiday Inn.
30% siyaado ah Joogitaankaaga Waxaad si fudud ugu nasan doontaa Holiday Inn, gaar ahaan markaad ku kaydiso joogitaankaaga tigidhada Holiday Inn iyo heshiisyada. Holiday Inn - qayb ka mid ah kooxda InterContinental Hotels Group ee sharafta leh - waxay ka hawlgashaa 400 oo hoteel oo ku yaal meelaha caanka ah ee Maraykanka iyo dibaddaba, iyagoo siinaya dhammaan raaxada guriga xataa inta aad mayl u jirto.
Ka qaad 60% Hoteellada Illaa iyo hadda, Holiday Inn Express waxay leedahay in ka badan 2,000 oo hoteel oo ku yaal waddamada adduunka, oo ay ku jiraan Faransiiska, Shiinaha, Brazil, iyo Mareykanka oo dhan. Haddii aad leedahay kulan ganacsi oo soo socda ama fasax la qorsheeyay, fiiri rasiidhada ugu dambeeyay ee Holiday Inn Express si aad u dhaliso qiimo -dhimis hoygaaga.
Ka qaad 15% Hoteellada Ballan qol ama qol ku yaal guryaha Holiday Inn ama Holiday Inn Express si aad ugu raaxaysato adeegyada sida sariiraha raaxada leh, xarumaha jimicsiga, barkadaha dabbaasha, goobta cuntada wanaagsan iyo waxyaabo kaloo badan. U hubso inaad u isticmaasho koodhka xayeysiiska Holiday Inn Express ee hoose si aad u hesho qiimo -dhimis boos celintaada xigta ama aad ka hesho dhibcaha Abaalmarinta Mudnaanta Naadiga ee InterContinental Hotels ...
Ka qaad 15% Xidhmooyinka Hoteellada Ku keydi qolalka hoteelka lambarrada xayeysiiska ee Holiday Inn Express & qiimo dhimis. Caqli badan safarka & ka faa'iidayso heshiisyo gaar ah. Si toos ah u ballanso qiimayaashayada ugu fiican!
Ka hel Hoteelka 50% Sideen u badbaadin karaa joogitaanada dheer ee Holiday Inn? Hel ilaa 18% qiimayaasha qolka caadiga ah marka aad ballansato joogitaanka ugu yaraan shan maalmood. Sideen uga heli karaa dhibco intaas ka badan Holiday Inn? Waxaad heli kartaa saddex dhibcood IHG Rewards dhibcood markaad ka ballansato qolka kulanka huteelkan. Holiday Inn ma bixisaa qiimo dhimis milateri?
Ku keydi 12% Amarkaaga SIDA LOO ISTICMAALO Kuuboonada Hoteelka ee Fasaxa. Holiday Inn waxay bixisaa hoy ay ku hoos jiraan dhowr magac, oo ay ku jiraan Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn Club Vacations, Holiday Inn Express oo caan ah, iyo InterContinental, EVEN Hotels, Candlewood Suites, Holiday Inn Resorts, iyo sidoo kale Staybridge Suites iyo HUALUXE Huteelada & Goobaha Dalxiiska.
20% dheeraad ah oo ka baxsan Diiwaangelintaada oo leh Koodh Goobaha Guriga Kuuboonada Kaarka Deynta Shidaalka Baabuurka Dhaq. Xirfadaha Guudmarka Cuntada Kafeega Fasaxa Cabitaanka Nafaqada. Dulmarka Guud ee Nadiifinta Naadiga - Naadiga Dhaqidda Gawaarida aan Xadidnayn - Meelaha lagu dhaqo Baabuurka. Coupon Coffee
10% dheeraad ah oo ka baxsan Diiwaangelinta Nidaamkan Sahaminta farshaxanka, matxafyada iyo xafladaha magaalooyinka ugu sarreeya oo keydi ilaa 15% xubin ahaan IHG Abaalmarinta Naadiga. Ilaa 12/31/2050. 4. Kuuboonada Express Holin Inn iyo Xeerarka Xayeysiinta ee Ogosto. Socota. 5. Ha noqon uun mid diyaar ah. Noqo Readiest. Ku shub quraac bilaash ah, oo macaan leh Holiday Inn Express.
20% siyaado ah oo Hoteelada laga jaray Dallacaadyada Holidayinn Coupons waxaa loo fuliyay si wax ku ool ah taas oo ku qancisay dad aad u tiro badan si ay u siiyaan tallaal iyo si taas loo ilaaliyo, waxay hibo u heleen heshiisyada Holidayinn Coupons iyo sidoo kale yaababka Holidayinn Coupons soo jeedinta gaarka ah.